Ungasakha kanjani isikhwama sokulala ukuze ulungele inani lokushisa? - Imikhiqizo yase-China Green Camping
Ungasakha kanjani isikhwama sokulala ukuze ulungele inani lokushisa?
Uma une-ithenda noma i-RFQ yesikhwama sokulala, kepha ikhasimende lakho lingenayo imininingwane ethile, bangakunikeza kuphela izidingo zokushisa ukuthi lezo zikhwama zizosetshenziswa noma yiziphi izinhloso. Ungasakha kanjani isikhwama ukuze ulungele inhloso?
Yini kuzoba yizici ezisemqoka zamazinga okushisa?
Kubandakanya ukwakheka kwe-mummy, ukwakheka kwemvilophu kanye nemvilophu nge-hood. Ijamo le-Mummy lilungile ukufinyelela izinga eliphansi lokushisa, ukwakheka kwe-envelop kunokwanele futhi kukhululekile, kepha kunzima ukufinyelela izinga eliphansi kakhulu. Ukumboza nge-hood kunamakamelo futhi kukhululekile njenge-envelop, futhi kungcono kune-envelop ukufinyelela izinga lokushisa eliphansi, kepha akukuhle njenge-mummy ukufinyelela izinga lokushisa eliphansi.
Ngaleyo ndlela sikhuluma ngokwakhiwa kwe-insulation nezinye izinto zokwakha.
· Simply 1 ungqimba. Lokhu kwakhiwa kuvame ukusetshenziselwa isikhwama sasehlobo noma isikhwama sokulala sesizini emithathu.
Ukwakhiwa kwezendlalelo ezimbili, okuyindlela esetshenziswa kakhulu ukwakha isikhwama sokulala ukuze ulungele ukusetshenziswa kwezulu elibandayo. Ngokwokuhlangenwe nakho kwethu, kusebenza kahle. Isikhwama sokulala samasosha amaningi nge
Ukwakhiwa kwezendlalelo ezimbili.
· Izingqimba ezintathu noma ngaphezulu, ukuze sifinyelele izinga lokushisa eliphansi kakhulu, singenza izikhwama ezi-4 zokulala okwamanje.
· Ikhola efudumele imvamisa ixazululwa engxenyeni ephezulu yesikhwama sokulala ukukhiya umoya oshisayo ngaphakathi esikhwameni.
Lalisetshenziselwa kakhulu isikhwama sokulala sama-mummy nesikhwama sokumboza sokumboza nge-hood.
· Umoya okuxakayo kuvame ukukulungisa eduze kwe-zipper ukuvikela isimo sezulu esibandayo singene esikhwameni ngokusebenzisa izinyo le-zipper.
· Dweba umucu wokuvala ovulekile omncane ngangokunokwenzeka.
· Akukho ukucwazimula phezu kwegobolondo ukuvimba umoya ukuba ungene embobeni yenaliti.
· Kuthuthukiswe “igumbi eliphindwe kabili le-H” ukuvikela umoya ukuba ungene ngembobo yenaliti. Sicela uthumele ama-FAQs. https://www.greencampabc.com/faqs/
Iziphi izinto ezisetshenziselwa isikhwama sokulala zinemizamo emikhulu ngesilinganiso sokushisa. Kubandakanya ukufakwa kwegobolondo & igobolondo kanye nogwayi.
Ngokuvamile, kunezinhlobo ezimbili zezinto ezisetshenziswa njengokufakelwa kwezikhwama zokulala. Eyodwa ifayibha yokufakelwa, enye ingezansi. Ezansi zingafinyelela izinga eliphansi kunefayibheli yokufakelwa esekelwe kumthamo ofanayo. I-fiber yokufakelwa ehlukile nayo isebenza ngokuhlukile.
Indololalu & Indwangu yokuzila
Isikhwama sasehlobo kwesinye isikhathi sisebenzisa indwangu enesisindo esikhanyayo futhi isikhwama sezulu esibandayo kwesinye isikhathi sinezindwangu ezithambile futhi zikhululekile, nakho okuhle ukugcina kufudumele.
Ingabe ikhona indinganiso yamazwe jikelele yokuchaza isilinganiso sokushisa sezikhwama zokulala?
Kunamazinga amabili aphesheya, i-EN ISO13537 ne-EN ISO23537. I-EN ISO13537 idalwe kuqala, i-EN ISO 23537 yinguqulo ethuthukisiwe. I-EN ISO13537 ne-EN ISO23537 ifana kakhulu futhi zombili lezi zimo zivumelekile. I-EN ISO23537 inemininingwane eminingi ecacisiwe maqondana nemvelo yokuhlola kuphela. Uhlobo lwamuva lwazo zombili izindinganiso ze-2 yi-ISO13537-2012 & ISO23537-2016. Ngalezi zindinganiso ezimbili, singachaza ukonakala okufudumele. Kungani akukhona ncamashi, ngoba umuntu ohlukile unomuzwa ohlukile. Futhi ukuze kuchazwe indinganiso yomhlaba wonke, kunezici ezithile ezingenangqondo kangako, njengendlela yokuhlola, imvilophu ne-mummy yehlukile.
Isikhathi sokuthumela: Jun-10-2020